Umkhiqizi wempilo enezela impahla - i-Wisepowder Nootropics powder
I-Wisepowder inebanga eligcwele lezinto zokusetshenziswa ze-Nootropics powder, futhi inesistimu ephelele yokuphathwa kwekhwalithi.
Ibonisa 1-20 yemiphumela engu-64
ICicicoline (CDP Choline) I-Sodium powder (33818-15-4)
I-Compound 7P powder (1890208-58-8)
I-Dehydroepiandrosterone (DHEA) powder (53-43-0)
I-Dihexa (PNB-0408) powder (1401708-83-5)
I-Nootropics powder noma izidakamizwa ezihlakaniphile ziyizinhlanganisela ezaziwayo noma izithako ezithuthukisa ukusebenza kwengqondo. Basebenza ngokwandisa umsebenzi wengqondo njengokukhumbula, ubuciko, ukugqugquzela, nokunaka. Ukucwaninga kwakamuva bekugxile ekusunguleni i-nootropics entsha engahle itholakale kwimikhiqizo yokwenziwa neyemvelo. Ithonya lama-nootropics ebuchosheni lifundwe kabanzi. Ama-nootropics athinta ukusebenza kobuchopho ngenombolo yezindlela noma izindlela, ngokwesibonelo, indlela ye-dopaminergic. Abaphenyi bangaphambilini babike ithonya lama-nootropics ekwelapheni ukuphazamiseka kwememori, njenge-Alzheimer's, Parkinson's, kanye nezifo zikaHuntington. Lokho kuphazamiseka kuyabonakala kuphazamisa izindlela ezifanayo zama-nootropics. Ngakho-ke, ama-nootropics asungulwe kamuva aklanywe ngobucayi nangempumelelo ezindleleni. Ama-nootropics emvelo afana noGinkgo biloba afundwe kabanzi ukuxhasa izinzuzo ze-nootropics ezizuzisayo.
Kunama-nootropics amabili ahlukene: zokwenziwa, elebhu elenziwe njenge-Piracetam powder, kanye ne-nootropics yemvelo neye-herbal, njengeGinkgo biloba nePanax quinquefolius (American Ginseng). Ama-Nootropics afakazelwa ekwandiseni ukusebenza kobuchopho ngenkathi ngasikhathi sinye enza ubuchopho bube ngcono.
Izindlela zokusebenza kwe-Nootropics
I-Nootropics powder ehamba phambili yehla amazinga e-malondialdehyde ebuchosheni, andisa amazinga e-antioxidant molecule anjengokuthi; glutathione ne-superoxide dismutase. v
Ukusebenzisana ne-dopamine-D2, i-serotonergic ne-GABAB receptors. v
Ukuncishiswa kwamazinga we-MAO-A kanye ne-plasma corticosterone. v
Yehlisa ukugcwala kwe-noradrenaline kanye nokwehla kokuphuma kwama-monoamines aphakathi nendawo. v
Ukuvinjwa komsebenzi we-acetylcholinesterase ebuchosheni. v
Kwandisa okuqukethwe kwe-lipids nama-phospholipids ebuchosheni. v
Vikela ama-neurons ekulweni nobuthi obudonswa yi-glutamate. v
Ukushintshashintsha komsebenzi we-NMDA receptor. v
Umsebenzi wamahhala wokuqothula; kunciphisa i-H2O2- eyengelwe i-cytotoxicity kanye nomonakalo we-DNA.
Ukukhuthaza Ukufunda Nenkumbulo:
Ukufunda yinqubo yokuthola ulwazi olusha noma ukuguqula ulwazi olukhona, kanti inkumbulo yikhono lobuchopho ukufaka, ukugcina, kanye nokuthola ulwazi lapho ludingeka. Kokubili ukufunda nememori kubalulekile ekujabuleni okuhlangenwe nakho, ukuhlela izinto ezizokwenzeka esikhathini esizayo, nokugcina izinga lempilo ephezulu.
Thuthukisa Ukugxila nokunaka:
Ukugxila nokunaka kuyikhono lokugxilisa ingqondo yomuntu emsebenzini owodwa ngenkathi unganaki isisusa semvelo sendawo. Kunezici ezahlukahlukene zokunakwa, futhi zenza eminye imisebenzi eminingi yokuqonda.
Thuthukisa Amandla Akho Engqondo:
Ingqondo idla cishe amaphesenti angama-20 amandla omzimba, futhi amandla obuchopho ahlanganiswe nempilo yonke yobuchopho. Ngaphandle kwamandla anele, konke ukucubungula kwengqondo kuzokwehliswa.
· Ingaholela Esimweni Esingcono Sokuzizwa
I-Mood ihlanganisa izifunda eziningi zemiqondo, kufaka phakathi ukukhathazeka nokudangala. Isimo esingesihle sikhonjisiwe sithinta amandla wobuchopho, ukumelana nengcindezi kanye nokujikeleza kobuchopho.
Khulisa Ukuqina Kwakho Kwingcindezi
Ukucindezela kunomthelela ngokusobala ukusebenza kwengqondo kanye nenhlala-kahle. Ngenkathi ukuphathwa kwengcindezi kufanele kube yingxenye ebalulekile yanoma yiluphi uhlelo lokuthuthukisa umsebenzi wokuqonda, amanye ama-nootropics powder nawo angasiza.
· Ukunikeza Neuroprotection
Ngenkathi abantu abaningi basebenzisa lezi zinto ukuthola umfutho osheshayo wobuchopho, izinzuzo zesikhathi eside ze-neuroprotective ze-nootropics akufanele zinakwe. Olunye ucwaningo luveza ukuthi izici zokwehla kwengqondo ezihlobene nobudala zingaqala kubantu abadala abanempilo, abafundile yize beseminyakeni yama-20 nama-30s. Ngamanye amagama, akukaze kube kudala kakhulu ukuqala ukunakekela ubuchopho bakho-futhi ama-nootropics Powders angadlala indima.
Ungayisebenzisa Kanjani i-Nootropics?
Uma uzoqala ukuzama nge-nootropic supplements Powder, uzodinga ukwenza imali encane ukuze uqalise. Ama-nootropics aphezulu kakhulu asezingeni eliphakeme athengiswa ngamafomu abo amsulwa njengama-nootropics powders powders. Ngokwemvelo, ungahle uzibuze ukuthi kufanele ulinganise kanjani ne-nootropic powder ukuthi ungayithatha kanjani.
Njengoba iningi lalezi zinhlanganisela zikhona emvelweni, ungangeza lokho kudla okusekwe ezitshalweni ekudleni kwakho. Ngaphandle kwalokho, ungasebenzisa izithasiselo ze-vegan kanye ne-organic ekudleni kwakho ukuze uthole izinzuzo zabo eziphelele ezingabakhona. Noma, ungabangeza kwifomu le-powder kuma-smoothies, itiye, noma iziphuzo.
Abanye abantu bayayangana nezinto ezimbalwa; Ngalesi sizathu, udinga ukulalela umzimba wakho nodokotela wakho futhi usebenzise lezi zithasiselo ze-nootropic ngokufanele.
Asikho isengezo esingakhipha imiphumela elimazayo yezinketho zokuphila ezingezinhle ezingaxhasi impilo yakho yobuchopho. Ngakho-ke, udinga ukwenza ushintsho oluhle lwe-mutour yokuphila ukuze uthole izinzuzo eziningi zale mishanguzo ehlakaniphile.
Ingabe ama-Nootropics aphephile?
Ukunquma ukuphepha kwe-nootropic kuyinkimbinkimbi kakhulu kunokuba kubonakale. Ngokungafani nezidakamizwa zemithi, ama-nootropic supplements akudingeki ukuthi ahlolwe izivivinyo zemitholampilo ezibonisa ukuphepha kwawo ngaphambi kokuthengisa. Yonke inqubo yokukhiqizwa kwe-nootropics ingathinta ukuphepha kwe-nootropic. Ukusuka emthonjeni we-nootropics powder kuya ku-nootropics izidakamizwa ukusetshenziswa kokugcina.
I-Nootropics powder iyisithako esibaluleke kakhulu se-nootropics supplements, umenzi we-nootropics powder ungumthombo oqondile we-nootropics. Ifektri enhle ye-nootropics powder kumele ibe nezindawo zokukhiqiza eziklanywe ngokuphepha njengezinto ezibaluleke kakhulu.
Ezinye izinto ezithinta i-Nootropics ephephile zifakiwe:
(1) Ukuphepha okusekelwa ngocwaningo
Indlela enhle yokuqinisekisa ukuphepha kwe-nootropic inezilingo zomtholampilo zabantu.
(2) Amafomu e-nootropic athuthukile
Lapho izithako ze-nootropic (i-nootropics powder ephezulu) zilethwa ngamafomu asezingeni eliphakeme, ukuphepha kwawo kungathuthuka
(3) Ukwakheka ngokucophelela
(4) Ukulethwa okuhlanzekile
Yini enhle ama-nootropics aphephile uma ngabe amaphilisi okuwahambisa awakulungele? Ezithasiseleni ze-nootropic, kwesinye isikhathi sibona abakhiqizi besebenzisa amakhompiyutha, izithasiselo nezinketho zezithako ezingabazekayo ezihlotshaniswa nobungozi bezempilo obungaba khona.
(5) Thatha ama-nootropics ngendlela efanele
Uma ufuna ukuthenga ama-nootropics, ukucabanga kokuqala mhlawumbe kungukuthi "Ingabe ama-nootropics aphephile?" . Kunzima ukunikeza impendulo eqonde yebo noma cha. Ngoba kunokuhlukahluka okuningi kakhulu okungathinta ukuphepha kwe-nootropic, kusuka kwisithako kuya kwisithako nomkhiqizo kuya kophawu. Ngaphambi kokuthenga i-nootropics powder, kungcono wenze ukusesha okuningi, kusuka kumthombo we-nootropics powder kuye ekulethweni.